Amisom iyo Alshabaab oo Muqdisho ku dagaalamay | KEYDMEDIA ONLINE
Amisom iyo Alshabaab oo Muqdisho ku dagaalamay
MUQDISHO(KEYMEDIA) Ciidamada Amisom ee mataanka la ah dowlada iyo kuwa Shabaab ayaa ku dagaalamay magaalada Muqdisho saakay iyo xalay.
Dagaalka ayaa ka dhaca aagaga Hodan iyo Boondheere iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isu adeegsadeen hub inta gacantooda ay qabatay ee ay heli kareen.
Inta xogtooda la helay dagaaladaasi waxaa ku geeriyooday 4 qof oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay, iyadoona la soo warinayo in dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanadaasi qeyb ka mid ah ay dhibaato gaartay.
Magaalada Muqdisho ayaa tan iyo xalay waxaa laga maqlayay daryanka Madaafiicda iyo hubka culus ee ay dhinaycada is weedaatsanayaan, waxaana ila madax banaan ay sheegeen in dagaalka ay qaadeen kolkii hore ciidamada Amisom ee dowlada KMG ah taageera.
Inta badan dagaalada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sababaan qasaaro gaara rayidka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan iyadoona dhinaycadaasi midkoodna aanu qaadan mas'uuliyada dhibaatada.